Tababaraha Xulka Qaranka Barazil Oo Dagaal Cad U Galay Sidii Uu Neymar Ula Tartami Lahaa Rolando Iyo Messi – Heemaal News Network
Tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ayaa sheegay in xidiga qarankiisa ee Neymar Jr uu si toos ah ula tartami doono Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi isla markaana uu noqon doono xidiga si dhab ah ugula loolami doona abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Or kadib markii uu xidiga reer Brazil ku biiray Paris Saint-Germain.
Neymar ayaa lacag rekoodh aduun ah ugu biiray PSG waxaana sababta ugu wayn ee bixitaankiisa lagu tilmaamay sidii uu uga hoos bixi lahaa hadhka Lionel Messi.
Tababare Tite oo Neymar ku soo daray liiska xulka qarankiisa Brazil ee kulaamada caalamiga ah ee soo socda ayaa sheegay in saddexda xidig ee ugu fiican aduunka in ay ku tartami doonaan Ronaldo, Messi iyo Neymar.
Tite ayaa xusay in Ronaldo iyo Messi ay jiil kale ka yimaadeen isla markaana uu Neymar yahay xidiga jiilkan kula biiri doona.
Tababare Tite oo ka hadlaya ciyaartoyda u tartami doonta Ballon d’Or ayaa yidhi: ” Waxaa jira saddex ciyaartoy oo booskaas u dagaalamaya, Cristiano, Messi iyo Neymar. Cristiano iyo Messi waxay ka yimaadeen jiil ka duwan isla markaana Neymar ayaa halkaas tagi doona. Taasi waxay ku xidhnaan doontaa bandhigiisa kuma xidhnaan doonto haddii uu Messi la ciyaaro”.
ite oo Neymar ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Dabeecadiisu waa in uu jecel yahay ciyaarista kubbad cagta. Waxa ugu muhiimsani waa in uu fiican yahay oo uu la qabsaday kooxdiisa cusub. Qiimaha iyo lacagtu waxba ma badalaan, waxa uu tagay koox kale sidii uu sheegay wuxuuna raadsaday tartan cusub”.
Ugu danbayn Tite ayaa sheegay in qaabka shaxda PSG oo la mid ah Barcelona oo isticmaasha 4-3-3 in ay Neymar caawin doonto wuuxuna yidhi: “Xogta tatikada ay Paris isticmaashaa waxa uu aad ugu eeg yahay Barcleona-4-3-3, PSG waxay isticmaashaa laba gool dhaliye sidaa daraadeed waa nashqad isku mid ah. Waxa kaliya ee isbadalay waa dabaacada ciyaartoyda kuwaas oo Neymar ka garab ciyaari doona”.
Shirkada Trailblazer Firearms Ee USA Oo Bilowday Iibka Baaskoolada Aduunka Ugu Yar
Wuu Dhamaaday Wakhtigii Magacaygu Ahaa Mo Farah Hadda Ha La Iigu Yeedho Maxamed Faraax
Orodyahanka caalamiga ah ee u orda dalka Britain asalkiisuna yahay Soomaali Mo Farah ayaa sheegay inuu doonayo in hadda laga bilaabo loogu yeero Maxamed Faarax. Maxamed Faarax ayaa warkan ku dhowaaqay kahor tartan Maaratoon ah […]